Ego Bitcoin ihe ọ bụ na otu esi azụta? Uru na ọghọm na Bitcoin | Akụkọ akụrụngwa
Guillermo Mancho kwuru | | Ego
Ego ego Bitcoin bụ ihe mkpuchi nke amụrụ n'oge gara aga August 1, 2017 site na Bitcoin ruo gbalịa idozi nsogbu scalability nke mbụ Bitcoin. Ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime ego ndị kachasị ewu ewu yana ọnụ ahịa ahịa dị oke elu nke na-etinye ya n'ọnọdụ 3 nke ngụkọta crypto ogo, naanị n'azụ mbụ Bitcoin na Ethereum. N'agbanyeghị obere ndụ ya, Bitcoin Cash nwere obodo siri ike n'azụ ya na enwere ụfọdụ ndị na-ekwu na n'ọdịnihu ọ ga-abụ Bitcoin kachasị mkpa, na-ahapụ ọbụna Bitcoin mbụ na ebe nke abụọ n'ihi nsogbu ya. Ya mere, pIji ghọta ihe Bitcoin Cash bụ, anyị ga-ebu ụzọ ghọta kedu ihe na ebe bitcoin si.
1 Mmalite nke Bitcoin
2 Akụkọ banyere ego bitcoin
3 Esi zụta bitcoin ego
4 Uru nke ego bitcoin
5 Nsogbu ego Bitcoin
6 Ego Bitcoin na bitcoin
7 Ego Bitcoin ego
Mmalite nke Bitcoin
E kere Bitcoin na-enweghị aha site na mmadu ma obu ndi mmadu n’okpuru aha nke "Satoshi Nakamoto". LEbumnuche onye a ma ọ bụ otu ndị a bụ ka ha mepụta ụzọ dị mkpa isi ziga ma nata ego site na iji teknụzụ amara dịka blockchain ma ọ bụ ihe nkedo. Onye kere Bitcoin "Satoshi Nakamoto" mejuputara usoro nke iwu na Bitcoin, otu n'ime ha bu na enweghi ike inwe karia Nde 21 Nke nkeji mgbe ihe ọzọ bụ na ịmepụta na ịmepụta ndị Bitcoin naanị otu ụzọ bụ iji ha software n'efu iji nyere aka dozie azụmahịa nke emepụtara n'enweghị nsogbu. Mgbe onye ọrụ zigara Bitcoin na onye ọzọ, nke a ga-akwụ ụgwọ ọrụ (ego) iji nye aka na netwọkụ; netwọkụ ga-abụ kọmputa ndị na-agba ọsọ sọftụwia a kapịrị ọnụ ka e wee nwee azụmahịa ahụ n'ụzọ ziri ezi. A na-akpọ kọmputa na / ma ọ bụ igwe ndị a "Ndị na-egwuputa ihe" na onye ọ bụla nọ n ’ụwa nwere kọmputa na ntanetị nwere ike ịbụ onye na-egwuputa ihe.
N'ụzọ nke a ọ gaghị adị mkpa iji ahụ dị n'etiti, ndị ọchịchị ma ọ bụ ụlọ akụ ị nwere ike ịtụkwasị obi ebe ọ bụ na gị onwe gị ga-aza ajụjụ na naanị onye nwe Bitcoins gị. Ọfọn, teknụzụ a kere na 2008 o nwere ụfọdụ ihe mgbochi; N'ihi njedebe ndị a, ọtụtụ otu ndị mmemme gosipụtara n'ebumnuche nke imeziwanye na ịbawanye ikike ndị a nke Bitcoin.
E kekwara ndị ọzọ buru ibu ndị raara onwe ha nye ịwụnye na ịtọlite ​​nnukwu ụlọ ọrụ Ngwuputa Bitcoin. Nke a ga - enyere ndị ọhụụ aka ịghọta ihe ọ bụ na otu esi kee Bitcoin Cash. Ma mgbe emechara, anyị ga-ahụkwa usoro iji soro nwee ike ịzụta Bitcoin Cash n'enweghị nsogbu.
Anyị ekwuola na e kere Bitcoin na-enweghị aha na ma ọrụ ahụ na ngwanrọ ahụ bụ ọha; nke a pụtara na onye ọ bụla nwere ike gbanwee ya, melite ya ma tinye atụmatụ ọhụrụ. Mana maka mmezi ndị a etinyere, ọtụtụ ndị "ndị na-egwuputa akụ" ga-anakwere ma budata mmelite a, nke a na-akpọ n'obodo "otutu mmadu kwenyere" Ma ọ bụ ọzọ na njirimara ntoala nke teknụzụ blockcheni.
Mgbe onye ọrụ na-eme azụmahịa a echekwara na a mkpọchiIhe mgbochi ọ bụla nwere oke 1MB nwere ike ịchekwa ọnụọgụ azụmahịa ụfọdụ, a na-emepụta ngọngọ ndị a na-akpaghị aka oge ọ bụla X, karịa oge akọwapụtara.
Otu n'ime nsogbu bụ isi nke Bitcoin na-ebilite mgbe ọ na-ewu ewu na ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa na-abawanye nke ọma. Mgbe ahụ ụfọdụ esemokwu na-ebilite na obodo Bitcoin banyere otu esi emeso nsogbu a. Nsonaazụ nke nsogbu a na - emetụta azụmahịa, ebe ọ bụ na ha karịrị akarị, ha na - abanye ọnọdụ nchere ebe ha na - agbakọta dabere na ọrụ onye ọrụ kwụrụ ụgwọ mgbe ọ na - eme ya. Mgbe nke a mere, isslọrụ ahụ na-abawanye (ka ọnụ ahịa netwọkụ na-abawanye) yana oge ọ ga - ewe iji kwado azụmahịa na - abawanye nke ukwuu ebe azụmahịa na kọmịshọn dị elu ga - enwe mmasị karịa ndị ọzọ.
Nke a na - ebili isi nke nsogbu ebe e kewara obodo Bitcoin na ọgụ nke "ọdịmma" na - amalite n'etiti ndị na - egwuputa ihe na ndị mmepe Bitcoin.
Aghọtara nke a anyị nwere ike ịkọwa ihe kedu ihe bụ Ike ndụdụ. Hardk Fork bụ nkewa nke isi ngọngọ nke ga-abụ Bitcoin. Nke a na-eme mgbe anabataghị atụmatụ nkwalite ahụ wee kewaa ndị na-egwuputa ihe na-akwado netwọk Bitcoin. Naanị mgbe ahụ ka ị nwere ike ịmepụta ego dijitalụ nke abụọ site na eriri mbụ nke ga-abụ Bitcoin, na nke a bụ otú "Bitcoin Cash" pụtara. Iji ghọta nke a n'ụzọ ọhụụ, ị ga-ahụ onyonyo a:
Ego ndụdụ Bitcoin
Nke a nwere ike ịbụ ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ, dabere na otu ị si ele ya anya. Mgbe a Nkpu Ike n'ezie ihe na-eme a ga-eme bụ a cloning. N'ihi ya, ndị na-egwuputa ihe na-akwado sistemụ ọhụrụ ahụ na-etinye data nke ihe mbụ na nke ọhụrụ ahụ na-emelite na mmelite ndị etinyere, nke onye ọrụ ọ bụla nwere Bitcoin na akpa ya (obere akpa) ga-enweta akpaka na n'efu Bitcoin Cash, nke ahụ bụ ugbu a mgbe ike ndụdụ ị ga-enweta bitcoin na ego bitcoin.
Akụkọ banyere ego bitcoin
Akụkọ nke Ego ego Bitcoin Ọ dị mkpụmkpụ kemgbe August 1 sitere na 2017 nke sitere na nsogbu scalability na enweghị nghọta nke obodo a kpọtụrụ aha n'elu, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị echebara afọ ndị obodo Bitcoin nọ na-arụrịta ụka banyere esemokwu ndị a, akụkọ ihe mere eme nke Bitcoin Cash na-aga n'ihu.
Esi zụta bitcoin ego
Iji nweta Bitcoin Cash anyị nwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ, nke kachasị mfe ga-abụ debanye aha ma mepee akaụntụ na otu n'ime mgbanwe ndị isi. Iji maa atụ, anyị nwere ike iji otu n’ime ndị a:
Ozugbo anyị mepụtara akaụntụ anyị ga - eme ya nyochaa ya site n'inye akwụkwọ njirimara ma ọ bụ paspọtụ na akaebe nke adreesị na nnata ụlọ akụ.
Mgbe anyị nyochachara akaụntụ anyị, anyị aghaghị nyefee ego n’ụlọ akụ site na akaụntụ anyị gaa na akụ na-egosi ihe njirimara pụrụ iche ị na-enye na akaụntụ mgbanwe gị.
Mgbe anyị nwere ego na akaụntụ anyị, anyị na-akwụ ụgwọ naanị mee nzụta site na ntanetị weebụ gị ma gbanwee euro anyị maka Bitcoin Cash na anyị ga-etinye ego anyị.
Uru nke ego bitcoin
Isi uru nke Bitcoin Cash dị ole na ole ma e jiri ya tụnyere nke mbụ Bitcoin, azụmahịa ngwa ngwa na a ọnụ ala dị ala karịa na scalable.
Nke a ka ha mezuru na-abawanye nha nke ngọngọ ọ bụla site na 1MB ruo 8MB scalable ruo 32MB enweghị ihe ọ bụla ọzọ ndụdụ na-enye ohere n'etiti 23 na 92 ​​azụmahịa kwa abụọ tụnyere 3-7 tx / s (azụmahịa kwa abụọ) na mbụ Bitcoin na-enye ohere.
Nsogbu ego Bitcoin
Otu nsogbu dị na Bitcoin Cash bụ 8MB ngọngọ size nakwa n’ihi gịnị? Ọ dị mma, n'ihi na nke ahụ na-egosi itinye ego dị ukwuu na igwe nchekwa maka ndị na-egwuputa ihe na-enye aka na netwọkụ, nke nwere ike iweghachi ha, ndị nwere ike ịhọrọ ịkwado netwọkụ mbụ 1MB nke ọ na-adịghị mkpa ịme ego ọhụrụ.
Nsogbu ọzọ bụ na ndị ọrụ na-eji Bitcoin enweghị ntụkwasị obi ogo nnabata nke ahụ nwere ike ịnwe Bitcoin Cash n'ihi nnukwu ụgwọ ọ ga-enwe iji jigide netwọkụ ya, ebe ọ bụ na nke a nwere ike ime ka netwọkụ Cash Cash dịrị naanị n'aka mmadụ ole na ole dị ike na ego zuru oke iji chee ya ihu ma n'ụzọ dị otu a na-achịkwa ya obere ìgwè nke ndị nwere ọtụtụ njikwa nke netwọk, ebe mbụ Bitcoin netwọk na-ekesa na N'ihi ya siri ike ịchịkwa na centralize.
Ego Bitcoin na bitcoin
A na-egosi ihe nkiri ahụ, Bitcoin Cash jisiri ike tinye onwe ya nwa oge nke abụọ n'ahịa ahịa n'azụ Bitcoin. Ugbu a dịka ụbọchị nke akụkọ a, ọ nọ n'ọnọdụ nke atọ na ọnọdụ dị ka ndị a:
Ọgụ ahụ gara n'ihu na ọ ga-adịgide ruo ọtụtụ agba kemgbe obodo Bitcoin buru oke ibu na dịka ndị ọrụ ọhụụ matara na ngọngọ ma nwee mmasị na cryptocurrencies, ihe mbụ ha na-eme bụ itinye ego na Bitcoin kama Bitcoin Cash, n'ihi na ọ bụ nke mbụ na eze nwanyị niile. N'ime onye isi Bitcoin mbụ, Bitcoin Cash nwere ike ịbụ onye asọmpi tozuru etozu N'ihi nnukwu ndị na-etinye ego n'azụ ya na njirimara ya bara uru na azụmahịa ngwa ngwa na dị ọnụ ala karịa, mana nke a bụ nsogbu na cryptocurrencies ndị ọzọ dị oke mkpa edoziworị ogologo oge gara aga, dịka Ethereum, nke nọ n'ọnọdụ nke abụọ na isi ahịa, can nwere ike ịhụ ya na foto gara aga. Kedu nke anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị gịnị kpatara m ga - eji ma ọ bụ zụta ndị ọrụ ọ bụla ọzọ Bitcoin Cash mgbe Ethereum dị ngwa na ọnụ ala? N'ihi nke a, ọtụtụ ndị kpebiri itinye ego na Bitcoin n'ihi na ọ bụ eze nwanyị dịka ụlọ ahịa nke uru ma jiri ego dijitalụ ndị ọzọ dịka Ethereum rụọ ọrụ na mbupu.
Ego Bitcoin ego
Ihe atụ Bitcoin Cash chart
Na mbido ya, Bitcoin Cash malitere azụmaahịa karịa $ 500, na-esote oscillating n'etiti opekempe nke $ 200 na nke kachasị nke $ 2.500, na ụbọchị e kere eke isiokwu a Bitcoin Cash na-ere ahịa na ọnụahịa nke $ 1.248. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ọnụahịa na ezigbo oge, ị ga - agarịrị tinye njikọ a.
N'ebe dị otú a na-agbanwe agbanwe, na-eto eto na nke a na-ejighị n'aka na nke na-agbanwe agbanwe anyị amaghị nke ọma ebe ahịa ahụ ga-aga, mana n'akụkụ m, echere m na ihe ọ bụla nwere ike ime, yabụ ihe kachasị mma m lere anya na ọkwa onwe m ga-abụ nzọ. ma ịhụ ma hụ ka ihe ndị na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Ego » Ego Bitcoin ihe ọ bụ na otu esi azụta?
Ihe mkpuchi, dị ka Bitcoin, bụ ogige ụtụ na igwe ojii, na ihe atụ kachasị ọbara nke ịkọ nkọ na-adịghị arụpụta.
Google na - emelite igwe okwu Google Home Mini site na ịrụ ọrụ aka ọzọ